Fiahiana ara-tsosialy any Atsimo 35 tapitrisa dolara ho an�ny olona 320 000
Hatramin�ny faran�ity taona 2016 ity, olona 320 000 any amin�ny faritra Atsimon�ny nosy dia any Tsihombe, Beloha, Ambombe, Bekily ary Amboasary no hahazo sy hisitraka ilay fanampiana ara-tsosialy antsoina hoe�vatsin�ankohonana�.
Neken’ny filankevi-pitantanan’ny Banky Iraisam-pirenena ny 10 novambra lasa teo mantsy ny famatsiana ara-bola mahatratra 35 tapitrisa dolara hahafaha-manatanteraka ity tetikasan’ny governemanta Malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny mponina ity. Ny taona 2015 dia vola mitentina 40 tapitrisa dolara no neken’ny Banky Iraisam-pirenena hampindramina an’i Madagasikara mba hanatsarana ny fiahiana ara-tsosialy ka 4 taona ny faharetan’ny tetikasa saingy izao dia nahazo 35 tapitrisa dolara ary tsy honerana intsony, izay hahafaha-manampy ny olona any Atsimon’ny nosy mandritra ny 18 volana. Mitohy hatrany ny fifandresen-dahatra sy ny fitadiavana fiaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny mponina tarihin’ny minisitra Onitiana Realy sy ireo mpiara-miombon’antoka ka isan’izany ny Banky Iraisam-pirenena. Vao tsy ela akory izay no nihaona ny minisitra Onitiana Realy sy I Coralie Gevers, Mpandrindra ny asan’ny Banky Iraisam-pirenena eto amintsika ka nilazan’ity farany fa mipetraka ny fitokisan’ny Banky Iraisam-pirenena an’i Madagasikara.